“Rakkoo Guddaan Mirga Ofiif Gaafachuu Dhabuu Dha” Dr Nagaasoo Gidaadaa – Oromedia
Home » Marii » “Rakkoo Guddaan Mirga Ofiif Gaafachuu Dhabuu Dha” Dr Nagaasoo Gidaadaa
Imala Jarmanirraa hanga Aangoo Pireziidantumaatti..Dr.Nagaasoo Gidaadaa Soolan. .
“Hayyoota kan jedhaman gara OPDO tti dhufuu hin fedhan ture”……..
“Yeroo koree gidduu galeessaa Ihyaadiig turretti namoonni keenya(OPDO) gaaffii gaafachuu ni sodaatu ture”……….
” Yeroo ammaa Miindaan koo ji’aan birrii 2295 dha.”………..
” Hasan Alii, Yaasiini fi Almaaz Makkoo………Yoonattan Dhibbisaa fi Dirribaa Hariqoo………Barreessaa OPDO isa jalqabaa Abrahaam Malkaa. ……” Shiraanimoo? Dhugaaf baqatanii?………
Turtiin Dr.Nagaasoo waliin taasiiseen daqiiqaa tokkoyyuu hin balleessine jedheen yaada. Gaaffiirratti gaaffii kaasaan isaan waliin ture. Gidduu gidduutti dhiifama oduun sitti baay’ise natti fakkaata nan jedhu.Yommuun dabalee gaaffii gaafadhu hin nuffan, dhugumaan nama gaazexeessaan barbaadudha Dr.Nagaasoon.
# Isin dabalatee namoonni baay’een dhaaba OPDO, aangoos gadhiisanii baqa filatu. Maaliif? Moo durumaanuu osoo kaayyoo isaatti hin amaniin itti seentanii?
Dr.Nagaasoo ;Ani akkuman duraan sitti hime duraan ABO keessatti hirmaannaa ho’aan qaba ture; boodan gara kanaatti dhufe.warri kaanis akkasuma bakkuma garaagarraa dhufani.Sana boodas dhaaba kana hundeessniiru (OPDO). Haa ta’u malee namoonni keenya (miseensonni OPDO) gaaffii gaafachuu ni sodaatu turan. Fakkeenyaaf yeroo koree Gidduu Galeessa Ihyaadig(ADWAWI) turretti gabaasa dhiyyeessuu malee gaaffii hin gaafatan ture. Ani gaafadhaa jedhee yommuun isaanitti dheekkamu tasgabaa’i suuta gaafanna dhiphoota nun jedhu nan jechaa turan. Inni kun balleessaa guddaa ture. Mallas baay’ee nu tuffata ture. Dandeettii hin qabdan nuun jedha. Kunis maalirraa ka’e seeta ,Ambaasaaddarri Ameeriikaa “Bas” jedhamu tokko yeroo tokko haala ADWAWI(Ihyaadig) ilaalchisee odeeffaannoo(qorannoon) gaggeesse jedhee Mallasiif dhiyyeeseera. Innis “namoonni keessan baay’ee isaan hafa keessuma warri OPDO dandeettii hin qaban jedhe.”Erga sanaa kaasee Mallasis akkasumatti yaada waan ta’eef wal ga’ii gaafa teenyu jara keenyaan arrabsuu barbaada. Kanarraa ka’uun natti fakkaata baay’een keenya mirga keenyaaf gaafachuu ni sodaanna ture.
Anis yeroo baay’ee warra kan keenyaa waliin sababa sodaa kanaatti nan lola ture.
Nan yaadadha daawwannaaf gara Tigiraay deemeen sochii isaan gama dinaagdeen jalqabaniiran argeen dhufe. Kumaa Dammaqsaa fi Hasan Alii bira deemeen lakkisaa jarri kun nu gatanii deemaa jiru sochii dinagdee jalqabuu qabna jedhe jennaan na lolan……”Ati Jarmanii waaan dhufteef hin beektu Isaan Maallaqa saamaa turan hedduu qabu, nu dhoofsistaa tasgabaa’i nan jedhe Kumaan”………”Akkasumaanuu dhiphoota nuun jechaa jiru suuta jenna malee jedhe Hasan……” gaffa kana hedduu wal lolleen deeme isaan biraa.
Inni biraan hayyoonni ykn ogeessonni gara dhaaba kanaa (OPDO)tti dhufuu hin barbaadan ture. Kunis namoonni baay’een akka keessaa baqataniif karaa saaqeera natti fakkaata.
Hasan Alii baay’ee qoranna ture; hojii gama mootummaan jiru sirriitti hin hojjenne jennee. Dhuma kanarrrattis qorannoo sodaatee waan bade natti fakkaata. Yaasin ABO tti makamee ni du’e natti fakkaata. Almaaz Makkoo durumaanuu hedduu dubbachuu hin barbaaddu ejjennoo ishee kanadha siin jechuu hin danda’u.
Abraaham Malkaa dhiphoodha jedhameeti arii’atame.
Abrahaam isa kamidhaa?
Abrahaam jechuun yommuu OPDO’n Adeetitti hundaa’u Kumaa Dammaqsaa dura taa’aa dhaabaa,Abrahaam Malkaa immoo barreessaa dhaabaa ta’eetu filatame. Yoonattan Dhibbisaa fi Dirribaa Hariqoo bara Mallas boonappartiizim jedhe sana dhiisanii deeman. Akkuman siin jedhe rakkoo guddaan mirga ofiif gaafachuu dhabuudha.
# Haala yeroo ammaa OPDO’n irra jiru akkamii ilaaltu? Dr. keessumaa waan warraaqsa dinaagdee jedhanii jalqaban kana?
Dr.Nagaasoo ; Yoo itti fufaniif inni kun baay’ee gaariidha. Nan yaadadha bara waldaa wal gargaarsa Oromoo (OSHO) fi waldaa Misooma Oromiyaa hundeessine; guyyaa tokkotti birrii miiliyoona dhibba tokkoo fi lama walitti qabneerra.Gaafa sana anaa fi Almaaz Makkootu waltajjii gaggeessaa turre.
Hojiin amma Lammaanfaa,Dr.Abiyyifaa itti jiran gaariidha. Mucaan Qonna hoogganu sunis cimaadha. OPDO’n gaaffii gaafatu uumamuun baay’ee gaariidha. Garuu dursee kan gaafate uummatadha. silaa isaanitu dursuu qaba ture. Akka yeroo kan keenyaa san miti; amma hayyoonnis gara isaaniitti deemaa jiru. Waanti isaan gochuu qaban nama miseensummaasaatti osoo hin taane dandeettii isaatti fayyadamuu danda’uu qabu. Warri TPLF akkas gochaa turan. Keessumaa warraaqsa dinaagdeerratti.
#.Kitaaba keessan isa lammaffaa dubbbiseen ture. Bal’inaan kan inni irratti xiyyeeffatu waa’ee Sayyoo irrattidha. Garuu mata dureen isaa immoo Seenaa Oromoo jedha. Maaliif?
Eeyyyee isa nan amana warra maxxansiisetu gabaaf jedhanii akkas godhan malee sirrii miti. Anis akkas hin jenne.
# Yeroo ammaa maaliin jiraattuu? Madda galii qabduu?
Dr.Nagaasoo ; madda galii hin qabu; haadha warraa kootu hojjetee na jiraachisa. Isheen Narsii deesiftuudha. Animmoo soorama miindaa Paarlaamaa ji’aan birrii 2295 argadha.
#Soorama kan Pireziidantummaahoo hin argattanii?
Inni anarraa dhaabbateera; karaa sanaa faayidaan argadhu homti hin jiru. Mana kana keessaas akkan ba’uuf xalayyaan naan kennameera. Maaliif Paartii siyyaasaatti dabalamtaan faayidaan argachuu malu narraa dhaabbateera.
# Haalli fayyaa keessanii amma akkamidhaa?
Dr.Nagaasoo; Dawwaa ykn qorichaanan jiraadha. Lukaan daqiiqaa shanii ol deemuu hin danda’u; hidda dhiiga kootu rakkoo waan godhateeru, hidda dhiigaa nam tolcheetu miila koo tokkorratti naaf hodhameera. Isa silaa waggaa waggaan qulqulleesisuun qaba ture. Garuu maallaqa waan hin qabneef godhachuu hin dandeenye.
#.Doktor(Dr.) jedhamtaniittu,Seenaa keessatti Pireziidantii biyya kanaa taataniittu……amma maaltu isin hafee?
Lamaan keenyayyuu kofallee……Hanga dhumaatti nan qabsaa’a. Biyya kana keessatti qabsaa’aa fi namni siyyaasaa adda ba’anii hin ilaalaman. Garuu qabsaa’aa ta’uu fi nama siyyaasaa ta’uun garaa gara. Siyyaasni dabas sobas qaba. Qabsaa’uunimmoo dhimma namummaati.
Horaa bulaa dhimma biraan walitti deebina.
(Madda: Mitiku Fekadu)
Previous: Dr Nagaasoo: Qabsaa’aa Mirga Dhala Namaa
Next: SEENAA ABEEBEE TUFAA ARADDOO